ပြန်ကြား | BadeBOTTI.CH – ဆွစ်ဇာလန်မူရင်းကတည်းက 2004
BadeBOTTI.CH – ဆွစ်ဇာလန်မူရင်းကတည်းက 2004
Sauna မော်ဒယ်များ / အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို
အသားကင်အိမျမော်ဒယ်များ / စျေးနှုန်းတွေ
ဥယျာဉ်တော် SAUNA ဥရောပ
POD စခန်းချ - အိပ်စက်ခြင်းစည်ဥရောပ
Badefass ရေပူကန် Europa
Sauna တဲ Cabin ဥရောပ
ဓါတ်ပုံများ Galerie WellnessFASS
ကိုးကားပူ tubs-CH 1-50
ကိုးကားပူ tubs-CH 51-100
ကိုးကားပူ tubs-CH 101-150
ကိုးကားဥယျာဉ်ကို SAUNA CH 1-50
ကိုးကားဥယျာဉ်ကို SAUNA CH 51-100
L ကိုအို, G B က
ဧည့်သည်များမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များ / စျေးနှုန်းတွေ
သစ်သား – Whirlpool
တောင်းဆိုမှုစျေးစာရင်း – လျမှာကျွန်တော်တို့ကို Call +41 0-52 347 3727 ညဦးယံ၌သို့မဟုတ်တနင်္ဂနွေ
Sibylle Maglia - ဦးခေါင်းကျန်းမာရေးစည်. ကျွန်မပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသင်အကြံပေးနိုင်ပါတယ်
ထိပ်တန်းရေးသားချက်များ & နှစ်ဖက်
BADEFASS ဖွင့်ထားသောလေထဲတွင် Baden .. အာရဇ်ပင်ပူ tubs Clear ကိုဖန်ဆင်းနေကြသည်… (12,885)
ဥယျာဉ်ကိုပြုစု SAUNA သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥယျာဉ်တော်၌အဖြေသေးငယ်ကျန်းမာအိုအေစစ် .. စည်ပိုင်းချွေးပေါင်းအိမ်သင်ခွင့်ပြု… (6,744)
သစ်သားရေပူကန် မြောက်ပိုင်းကနေဒါ NATURA ကနေသစ်သားမီးဖိုနှင့်အတူဂန္ပူ tubs အဆိုပါဖြစ်ပါသည်… (6,720)
ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း BADEFASS ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူ tubs အကြောင်းကိုပိုမိုအသေးစိတ် - ကျွန်တော်တို့ရဲ့ catalog ထဲမှာကမ်းလှမ်းမှုသည်။… (6,308)
ဧည့်သည်များမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များ / စျေးနှုန်းတွေ ဤတွင်ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အတုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူအားလုံးဧည့်သည်များတောင်းဆိုမှုများကိုစာရင်းပြုစုထားပါပြီ. သင်ရှိသည်… (5,046)
သစ်သား WHIRLPOOL Classic နှင့်အချစ် - နည်းပညာနှင့်အတူသုံးစွဲခြင်း၏ရေချိုးအပျော်အပါးနှင့်ငြိမ်ဝပ်တွဲကိုစလှေတျ… (4,745)
စျေးနှုန်းစာရင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့စံစျေးနှုန်းစာရင်းပါဝင်သည်: hot tubs Pod ချွေးပေါင်းအိမ်တပ် ချ. ဥယျာဉ်ချွေးပေါင်းအိမ် Huttengrill အိမ်သူအိမ်သားကင်တဲမီးဖို… (4,724)
Europa-line မဟုတ်ဘဲအရေအတွက်ထက်အရည်အသွေးပြည့် .. ငါတို့၏ဥရောပလိုင်းအလိုလိုမြင်သည်အရာ. အရည်အသွေးမြင့်… (4,606)
ပွင့်လင်းဟင်းချက်ရန် ဂျာမနီနိုင်ငံ ကနေဒါဝုဒ် အသားကင်အိမ် ဥယျာဉ်တော်ရေချိုးခန်း မြို့ ချမ်းသာရေးသင်တန်း-chat အာရဇ်ပင် ထင်းမီးဖို ပထမဦးဆုံးနိုင်ငံများ ရုပ်ပုံများ Dampfsauna ပစ္စည်းများ အခွင့်အာဏာ Grillkabine siberian larch အသားကင် Hut တွင် weatherproof Grillhütte ပြန်ကြား Jacuzzi ဥယျာဉ်တော် Barrel စျေးနှုန်းစာရင်း အသက်ရှည် ရေချိုးကန် SaunaFASS Dampfkabine ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ Schwitzkabine Grillhaus ရေပူကန် အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ outdoor Sauna Sauna ရေပူကန် Badefass Saunahütte Holzwanne လိပ်စာ ရှင်းလင်းရေး စျေးနှုန်းတွေ Primo ကင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဗီဒီယို ဖင်လန် Sauna Sauna Pod
ab CHF 1699.- ဘတ်ဂျက်ထဲကနေသီးသန့်ဖို့ – BadeBOTTI.CH ဆွစ်မူရင်းပူ tubs ချွေးပေါင်းအိမ်ဥယျာဉ်ရှုခင်းကြည့်အဆောက်အအုံငယ် – ရေပူကန်အဆောက်အဦးအပြင်ချွေးပေါင်းအိမ် Jacuzzi – အိမ်မှာငြိမ်ဝပ်စွာ နေ. နှင့်အပန်းဖြေ – Badefass – Gartensauna – ရှုခင်းကြည့်အဆောက်အအုံငယ် handcrafted
Sibylle en သစ်သားရေပူကန်မင်္ဂလာပါ Ivana သင့်ရဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်၌သင်တို့၏အကျိုးစီးပွားများအတွက်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. . ...
Ivana en သစ်သားရေပူကန်ချစ်ခင်ရပါသော, ရရှိနိုင်အရွယ်အစားထုတ်ကုန်များ၏စျေးနှုန်းများအဘို့အစိတ်တော်? အဘယ်သို့ငါမဝယ်နိုင်? : P ...
Sibylle en BADEFASSကောင်းသောနေ့ကမစ္စ Suter သင့်ရဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏အသေးဆုံးပူ tubs တစ်ဦးရှိပါတယ် ...
Suter Bea en BADEFASSငါ့ကိုပြင်ပအပူသစ်သားအသေးဆုံးနှင့်အတူသစ်သားသင်္ဘောစာရွက်စာတမ်းများပေးပို့ပါ ...
Sibylle en WELCOMEကောင်းသောနေ့ကမစ္စတာ Wenzel သင့်ရဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. လက်ျာရေချိုးခန်းရွေးချယ်ရာတွင်များအတွက် ...
Björn Wenzel en WELCOMEငါ့ကိုမီးဖိုနှင့်အတူတစ်ဦးသစ်သားပူ tubs များအတွက်စျေးနှုန်းစာရင်းပေးပို့ပါ.
Sibylle en Katalog outdoor SAUNAကောင်းသောနေ့ကမစ္စတာ Bucher သင့်ရဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. နှင့်, သင်လုပ်နိုင်သည်သည်လည်းငါတို့အပူပေးခန်း ...
Bucher Beat en Katalog outdoor SAUNAမင်္ဂလာပါ, ငါ့ကိုအသင်တို့၏ catalog နှင့်စျေးနှုန်းစာရင်းပေးပို့ပါ. မေးခွန်း: သင့်ရဲ့လုပ်နိုင် ...
Sibylle en WELCOMEသင့်ရဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်အဘို့အချစ်ခင်ရပါသောဆာကျေးဇူးတင်ပါသည်. ငါသည်သင်တို့ကို e-mail ဖြင့်လက်ရှိစျေးနှုန်းစာရင်းကိုစလှေတျ. ...
Sibylle en ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း BADEFASSကောင်းသောနေ့ကမစ္စတာ Kuonen သင့်ရဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. ကျနော်တို့အမျိုးမျိုးသောရေချိုးစည်များ ...
POD စခန်းချ – အိပ်စက်ခြင်းစည်ဥရောပ
Impressum & အခြေအနေများ
သီးသန့်တည်ရှိမှု & ကွတ်ကီး: ဒီဆိုဒ်သည် cookies များကိုအသုံးပြုသည်. ဒီ website ကိုဆက်လက်သုံးစွဲခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်သူတို့၏အသုံးပြုမှုကိုသဘောတူသည်.
ပိုမိုရှာဖွေရန်, cookies တွေကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်ရမယ်ဆိုတာအပါအ ၀ င်, ဒီမှာကြည့်ပါ: ကွတ်ကီးမူဝါဒ
စော်ကားသောစွမ်းအားဖြင့် WordPress ကို
အထူးကမ်းလှမ်းမှုကို .. ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
အထူးလှုပ်ရှားမှု - အထိ 30% လြှော့ခွငျး !